Dhinacyo culus oo ku biiray shirka Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey | Warkii.com
Home warkii Dhinacyo culus oo ku biiray shirka Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey
Waxaa maalintii labaad galay shirka ka socda magaalada Muqdisho oo ay yeelanayaan musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Shirka maanta ka socda Muqdisho ayaa ka xoogeystay sidii hore, waxaana ku biiray ururada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed oo qeyb weyn ka ah doorashada Soomaaliya, ahna xubno ay si weyn u dhageysato beesha caalamka.
Madaxda shirka ka qeyb galeysa ayaa marti qaaday bulshada rayidka, waxeyna qeyb ka saari doonaan war-murtiyeed ku saabsan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashada oo dood weyn ka taagan tahay.
Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa dhowr mar oo horey ka digay wax kasta oo horseedi kara in doorashada dalka ay noqoto mid aan dhex-dhexaad iyo caddaalad ahayn.
Sidoo kale shirkaan ayaa la filayaa in ay maalinta berri ah ku biiraan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed waxeyna arrintaas sii kordhin doontaa culeyska saaran madaxda dowladda Soomaaliya ee ah inay wax ka beddelaan guddiyada doorashada eel aga horyimid.
Toddobaadkii horey ayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, gaar ahaan kuwa Hawiye, waxay la kulmeen ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaga oo ka digay tallaabooyin ay qaaday dowladda oo horseedi kara colaad iyo kala tag.
Villa Somalia ayaa wajaheyso culeyso badan, hase yeeshee, sida aan xogta ku helnay, waxaa ka go’an inaysan marnaba aqbalin in guddiyada doorasho wax laga beddelo, taasi oo haddii ay dhacdo ay u aragto fishil siyaasadeed iyo in masraxa siyaasadda looga adkaaday.
Previous articleDaawo Video:-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh “Kama Aqbalayno Fahad duminta Siyaasadda
Next articleWararkii ugu dambeeyey dagaalka Tigray oo xaalad cusub ay kusoo korortay
Hay’adda caruurta u qaabilsan QM ee UNICEF ayaa ku dhowaaqaday lacag malaayiin Dollar ah oo ay ugu deeqyso maamulka Puntland. Lacagtan oo gaareyso $2.9 milyan...